Moto Pit /Fireplace Zvikamu Vagadziri | China Moto Pit / Fireplace Zvikamu Suppliers & Fekitori
30 ″ Yakakura Nyore Kupinda Stainless Simbi Spark Screen
Gara wakachengeteka kubva kumoto unobhururuka neTianHua YiHe Easy Access Fire Pit Spark Screen.
Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina ine mesh dhizaini, iyi gomba remoto spark skrini ine chokwadi chekuchengetedza iwe nevaenzi vako kwakachengeteka kwemakore mazhinji. Chibatiso chiri nyore pamusoro chinobvumira kuiswa kwakachengeteka uye kubvisa. Zvakare, iyo yekuvhura yakasungirirwa inoita kuti iwe uwedzere nyore huni huni uye kutonga murazvo.
Corten Steel Yakaderera Utsi Moto Pit
CORTEN STEEL YAkaderera IHU UTSI MOTO GOMBA
- Ultra-inoshanda yakavharirwa kuyerera kwemhepo dhizaini
- Dual insulated weathering simbi alloy
- Yakakwana yevaraidzo yekunze
-Inopa toni yekudziya uye yakanaka marimi emoto
42-IN HEMISPHERE MOTO GOMBA
Wedzera chitarisiko chitsva kuchivanze chako ne42-inch Hemisphere Fire Pit kubva kuTianhua Firepit. Iri gomba remoto rinobata maziso rinogara rakasununguka 20-inches kumusoro uye rakagadzirwa kubva kusimba 0.4-inch gobvu rakakandwa simbi ine yakasikwa patina yerustic, yekushongedza kutaridzika. Iri gomba remoto rakasungirirwa nemaoko, rine gasi rakatenderera, uye 0.7-inch buri rekudonhedza kuti mvura isapinda. Gomba rakakwana rekudziya kuungana kwakakura uye kugocha ako aunofarira emoto.
Iyo 25 Watt Rotisserie Roaster inopa chikafu chakawedzera kunaka nemhepo iri nani yekufemesa, kunyangwe kutenderera, uye chaiyo yekutenderera kumhanya. Iyo inopenya-yesimbi-yesimbi yepamusoro inobatsira kutungamira kupisa kubva kumarasha kuenda kunyama, kuderedza nguva yekubika, kuchengetedza marasha, uye kuwedzera hutano hune hutano sezvo mafuta ese achiyerera pasi petireyi, saka iwe unowana nyama ine muto, nyoro panzvimbo yemafuta. roasts. Iyo 51-inch dual prong spit rod inogona kugocha nguruve, gwayana, huku, turkey, mapendekete enguruve, kana chero chinhu chinorema kusvika 125-pounds.
Chero ani zvake akambobikwa paki akayemura iyi inonakidza, heavy steel grill. Zvakanaka, ikozvino iwe unogona kuva neyako yepaki-style grill kuseri kwemba yako!
Iine mana ari nyore kuseta mazinga, uye gobvu, rinorema basa grate, unogona kuva nechivimbo chekuti steaks ako anogara akabikwa zvakakwana. Iyo 8 ″ x 8 ″ base yakagadzirirwa kukwirisa grill kune kongiri, uchishandisa ina 1/2 ″ x 3 ″ screws.
28 ″ HEX MOTO GRATE
Iyi yakatsetseka uye yakasimba Hex Fire Grate kubva kuTianhua Firepit ndiyo nzira yakanaka yekuwedzera kuyerera kwemhepo kumoto wako kuitira kuti utore iwo moto unodzvova unodiwa mumwedzi inotonhora yechando! Ingoisa mukati menzvimbo yako yemoto iripo kana gadzira iyi grate kukwezva kwayo uye wagadzirira kuenda!
Wedzera mwero wekupisa unogadzirwa nenzvimbo yako yemoto uchibvisa huwandu hwehutsi hwakagadzirwa neyedu Yakanyanya Kubudirira Log Grate!
30 ″CAULDRON MOTO MBORO YEMOTO NEGATE NECHENI
Iyo 30-inch Cauldron Fire Pit Bowl inowedzera chimiro uye inopa yakasarudzika marongero kune yako yekunze nzvimbo yekuunganidzira. Yakavakwa kubva kusimbi yakasimba uye yakagadzirirwa kutsungirira mamiriro ekunze, iyi yakasarudzika gomba remoto rinopenya kupisa kwese kwese. Iyo ndiro inokubvumira kuti uwedzere marasha akawanda, machipisi, kana huni pasina kunetseka nezve moto unobvira. Kana kuti unogona kubatidza moto pasi peiyo cauldron kuti ushandise nzira yehovheni yechiDutch yezvikafu, zvidyo, uye casseroles. Iyi inorema-basa Moto Pit Cauldron inouya yakashongedzerwa neyakarembera cheni uye marasha grate. Iyo Cauldron Fire Pit yakanakira chero mwaka, ichipa zvakanyanya-inoda kupisa kunze mukati memwedzi yechando uye inoyevedza yakasikwa mwenje sosi yekunakidzwa kwezhizha.
36”BASA RAKAREMERA RUNDZO RUMOTO GOMBA GRERE
Iyo Tianhua 36.5 ″ grate ikwidziso yakakwana kune yedu yakakurumbira 36 ″ Mhete yeMoto. Iwo 4 ″ makumbo anopa nzvimbo yakakwana pasi pegirati yekufefetera kana uchipisa huni dzemoto pamusoro payo.
WAGON WHEEL MOTO UNOGONA
Iyo Wagon Wheel Fire Grates yakanaka yekushongedza gireti ine yekusimudza kwayo yekuseri kwemoto kuungana. Aya magirati anomira masendimita mana kubva pasi kuti awedzere kuyerera kwemhepo kuti moto wako utinhire pasina nguva, uye nehutsi hushoma. Yakagadzirwa iine heavy-duty simbi chimiro, iyi dhizaini yeWagon Wheel ine mipendero yakakombama kubatsira kutakura huni kubva pakukunguruka kubva pagiriti. Isa iyo Wagon Wheel Fire Grate mukati mefirita yako iripo kana kuti cauldron uye nyura mukudziya uye kunhuhwirira kwemoto uri kubvira.
24 ″ x1.25 ″ SOLID STEEL MOTO GARE
Iro basa rinorema kwazvo 1.25 ″ simbi yeTianhua Firepit inoita kuti iyi ive yekuwedzera kune yako yemukati kana yekunze huni inopisa moto.